Gonzo's Quest | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! Gonzo's Quest | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
GONZO गरेको खोज
समयमा पछाडि जानुहोस् र famed स्पेनिश अन्वेषक सामेल, Gonzalo Pizarro, एलडोराडो को हराएको शहर आफ्नो खोज मा. GONZO गरेको खोज कतै स्थित गर्न दक्षिण अमेरिका मा भने थियो कि mythical शहर सुन बनेको यो Conquistador खोज गर्न समर्पित छ कि एक खेल छ. सुनको शहर आफ्नो खोज मा, सायद तपाईं पनि आफूलाई लागि ती सुनको पुरस्कार केही लो सक्नुहुन्छ!
धन को लागि देख
GONZO गरेको खोज छ5रील,3पङ्क्ति र 20 paylines. के तपाईं जीत कि पुरस्कार सङ्कलन गर्न रील स्पिन रूपमा खेल पेरु को jungles मार्फत खोजी गरेर हराएको सहर लागि आफ्नो खोज मा Gonzo मदत वरिपरि थिम्ड छ. तपाईं बल्ल शहर फेला सफल जब तपाईं Jackpot प्राप्त हुनेछ.
यो खेल मा शुरू भएको थियो 2010 लोकप्रिय खेल कम्पनी द्वारा, NetEnt. यो कम्पनीको पहिलो प्लेटिनम भिडियो थियो स्लट खेल यो पहिलो शुरू भएको थियो जब भेटी र भारी सफलता आनन्द. यसको उत्कृष्ट ग्राफिक्स र गेमप्लेको मार्फत, यो अझै पनि संसारभरि लोकप्रियता उठाउँछ, आज.
GONZO गरेको खोज केही आँखा पक्रने ग्राफिक्स सुविधाहरू, गैर-हस्तक्षेप पृष्ठभूमि संगीत, र बोनस सुविधाहरू एक हिमस्खलन सुविधा समावेश र निःशुल्क spins सुविधा कि छ. को हिमस्खलन सुविधा तपाईं स्क्रिनको माथिबाट तल लडनु रील एक हिमस्खलन छ जसमा एक. तपाईं एक विजेता संयोजन प्राप्त गरेर हिमस्खलन सुविधा सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ र नगरेसम्म कुनै पनि अब जित्न सक्छ यो retriggering राख्न सक्नुहुन्छ. तपाईं 15x सम्म यो मोडमा multipliers आनन्द उठाउन सक्छौं.
निःशुल्क spins सुविधा तीन वा बढी फ्रिफल प्रतीक प्राप्त गरेर सक्रिय हुन सक्दैन. तपाईं मुक्त spins मोडमा हुँदा तपाईं पनि हिमस्खलन सुविधा सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईँको wager multipliers थप्न र तपाईंले केही सुन्दर व्यवहार लागि हो. यदि तपाईं थप विजेता लाइनहरु प्राप्त निःशुल्क spins retriggered गर्न सकिन्छ.
किन प्ले GONZO गरेको खोज?
यो खेलको बारेमा बाहिर खडा पहिलो कुरा एनिमेसन छ कसरी चिल्लो छ. यसलाई आफ्नो सामान्य स्लट खेल जस्तै महसुस गर्दैन र यो खेलाडीहरू बीच यति लोकप्रिय छ किन हेर्न त्यसैले सजिलो छ. हरेक समय तपाईं एक विजेता संयोजन स्कोर, को रील मार्फत GONZO moonwalks, तपाईं खेलिरहेका छन्, जबकि जो एक हास्यकार अनुभवको लागि बनाउँछ. यसलाई खडा बनाउँछ कि खेल को अर्को ठूलो पक्ष कि रील स्पिन छैन भन्ने तथ्यलाई छ; तिनीहरूले ब्लक को एक गुच्छा जस्तै पतन. यो कि तपाईं एक आकस्मिक सानो खेल खेल्न र पनि छन् महसुस तपाईं संग पैसा सट्टेबाजी छन् भूल बनाउन बनाउन यी सुविधाहरू छ. बोनस सुविधाहरू तपाईं प्ले लागि केही ठूलो पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने अर्थ; पनि पेआउट टाढा अलग छन् भने, तपाईं धेरै जित्न सक्छौं तिनीहरूले रोल बेला.
जंगल जिम एलडोराडो
ज्याक र Beanstalk